Buluugleey, March 4, 2006
Waxaa la filayaa maalinta berito ah in kulankii baarlamaanka ay doodiisu ka bilaabato magaalada Baydhabo. Qodobada ugu waaweyn ee la doonayo in go’aan laga gaaro ayaa waxaa ugu horeeya qaadista cunoqabateynta iyo keenista ciidamo Itoobiyana oo dadka hubka ka dhiga.
Waxaa kaloo keyd daboolana in codka kalsoonida loo qaado dowlada uu wasiirka kowaad ka yahay Prof. Cali Maxamed Geeddi oo siyaasadiisu ka fogaatey mariin habowgii uu u xariiqay Col. C\_llahi Yusuf.
Waxaa lagu eedeeyey dowlada Prof. Geeddi ineysan sameyn wax dadaala oo Soomaalida lagu heshiisiinayo. Waxaana dadka inta badan ay la socdaan in Col. C\_llahi uu abuuray xaalada cakiran ee ka jirta siyaasada Soomaalida kadib markii uu hub iyo ciidamaba soo kor dhoobay duleedka magaalada Muqdisho, isaga oo ku hanjabaya inuu duulaan ku qaadayo degaanka Muqdisho.
Prof. Geeddi ayaa hadda dabada la galay dagaaloogayaasha Muqdisho si uu uga horyimaado haddiiba uu ka soo baxo shirka baarlamaanka ee ka socda magaalda Baydhabo wax ka soo horjeeda dowladiisa.
Col. C\_llahi ayaa shaxdiisa waxaa ka mid ah inuu dhinacna xubnaha baarlamaanka taageersan uu kula xaajoodo iney dadaal u galaan beelaha kale xubnaha ay ku leeyihiin baarlamaanka si loogu ansixiyo soo gelinta ciidamo Itoobiyana, dhinaca kalena wuxuu doonayaa inuu ku qanciyo xubnaha ka soo jeeda Muqdisho inuu ku qaldamay siyaasadii uu ugu dhowaadey dowlada Itoobiya. Ujeedadiisu hadda waa inuu helaa cid reer Muqdisho ah oo u bedesha kaalintii ay baneeyeen Geeddii iyo Maxamed Dheere. Waxaa kaloo qorshihiisa ka mida inuu hirgeliyo ciidan shisheeye oo dagaal la gala dagaaloogayaasha Muqdisho.
Waxaa hadda inta badan xubnaha baarlamaanka ee ka soo jeeda Bay iyo Bari ay isku afgarteen in wadanka la soo geliyo ciidamo Itoobiyana, inta badan aqlabiyada waxaa lagu xisaabtamayo iney ansixiyaan qodobadaas. Xubnahaas inta badan waxaa wadata Itoobiya, inkastoo qaar ka mida isbaheysigaas ay ogyihiin kuwa kale ee kaga soo horjeeda maamulka degaanadooda in iyana ay gacansaar la leeyihiin Itoobiya. Waxey u muuqataa xooga riixaya isbaheysigan doonaya in dalka la keeno ciidamo Itoobiyana inuu yahay mid salka ku haya naceyb qabiil oo loo hayo kuwa degan Xamar iyo hogaamiye kooxeedyadooda.
Shirka Baydhabo ayaa u socda shir burburkiisa ay ka shaqeynayaan Col. C\_llahi, Geeddi iyo dagaaloogayaasha Muqdisho, iyadoo qeyb walba ay ujeedo gaar ah ka leedahay fashilka shirkaas. Waxaa sidoo kale gadaal doorkooda ka qaadanaya dowladaha Talyaaniga iyo Mareykanka oo labada kooxood si dadban u kala taageersan.